မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.) ၏ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုခရီး။ ...(၃) | Mahasi Sasana Yeik Tha
မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.) ၏ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုခရီး။ ...(၃)
Submitted by im_admin on Mon, 01/04/2016 - 13:58
နယူးယောကမြို့ မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာရိပ်သာတွင် ယောဂီများနှင့်အတူ
(၂၃-၅-၂၀၁၅) ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီတွင် ကျောင်းသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်တော်မူပြီး အခမ်းအနာသို့ ကြွရောက်လာသော သံဃာတော်များနှင့်ဧည့်ပရိတ်သတ်တို့အား သီလပေးခြင်း၊ တရား ဟောခြင်း၊ ကြွရောက်လာသော သံဃာတော်(၈)ပါးတို့က ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ကြွရောက်လာသော ပရိတ်သတ်တို့က ဆရာတော်များအား ၀တ္တုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ဆရာတော်ကြီးမှ ရေစက်ချအနုမောဒနာ တရားဟောကြားခြင်းများပြုလုပ်၍ သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်ခြင်း၊ ဧည့်သည်တော်များအား နေ့လည်စာဖြင့် ဧည်ခံကျွေးမွေးခြင်းများပြုလုပ်ကြပြီး နေ့လည် (၁)နာရီခန့်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။